Matipi ekuchengetedza mari pakutakura | ECommerce nhau
Matipi ekuchengetedza mari pakutakura
Jose Ignacio | | Logistics, Kutakura
Chengetedza mari pakutakura: kunyoresa mune mameseji. Hapana mubvunzo kuti kuvimbika nemakambani ekufambisa aya kunogona kuve sosi yakanaka yekuchengetedza mari yekuvandudza aya mabasa ehunyanzvi. Unofanira kuzviedza nekuti mhedzisiro yacho inogona kuve inoshamisa kubva panguva chaidzo idzi. Pakupera kwezuva iri nezve kugadzirisa mashandiro aya mukutumirwa. Nekuti mabhizinesi madiki anotumira zvinhu nguva zhinji, tora mukana wezvirongwa zvebhizimusi mibairo.
Paunowedzera kushandisa paunotumira mwedzi wega, ndipo paunonyanya kusevha. Iko hakuna chikonzero nei iwe uchifanira kubhadhara mitengo yekutengesa kana uchitumira muhuwandu hwehuwandu. Iko kuderedzwa kwemitengo kunogona kuve kwakakura kwazvo uye kunyangwe kusvika pamatanho e kusvika ku40% pamusoro pemutengo wayo wepakutanga.
Ehezve, iwe unofanirwa kuve uine account yevatengi iyo inokutendera iwe kukudziridza iyi zano yekutumira zvigadzirwa zvako kuzvinyorwa kune ako vatengi kana vashandisi kubva zvino zvichienda mberi.
1 Sarudza kurongedza kwakakwana kwezvigadzirwa zvako
2 Zvigadzirire pamwe nekutarisira
3 Shandisa imwe nguva pane izvi maitiro
4 Kudzivirira munguva dzinoshamisa
5 Gadzira Rongedza Rongedza pane zvekutumirwa kune dzimwe nyika
6 Kusarudza iko kurongedza
7 Sei zvakakosha kuchengetedza?
Sarudza kurongedza kwakakwana kwezvigadzirwa zvako
Imwe sisitimu iyo iwe yaunogona kushandisa izvozvi ndiyo ine chekuita nehukuru hwekutumira ivo pachavo. Mupfungwa, iwe unofanirwa chinja kukura yezvigadzirwa kana zvinyorwa zvauri kuzotumira kune ako vatengi. Nekuti pakupera kwezuva, kubudirira kwekuvhiya kuri muchokwadi chekuti kurongedza hakuna kutambiswa. Uku kusagadzikana kunoitwa nekumwe kuita uye kunozopambadza mari zhinji gore rese.
Kukura kwebhokisi rako, ndipo pauchazobhadhariswa, saka ita shuwa kuti une bhokisi padyo nehukuru hwekutakura sezvinobvira. Kunyangwe dzimwe nguva zvichinyatsoita nyore kushandisa iro hofori bhokisi mune yekuchengetedza kutumira chimwe chinhu kuburikidza neemail, iwe unozopedzisira wabhadhara zvinopfuura zvakafanira kuti zvive nyore. Ehezve, kana iwe ukashandisa aya akapusa matipi iwe unogona chengetedza mari mwedzi wega wega uye mushure menguva unozozviona muakaunti yako yekuchengetedza. Ndokunge, shure kwezvose, ndeupi rudzi rwekuita kwakakosha kuri nezve.
Zvigadzirire pamwe nekutarisira
Unogona kusazviziva, asi pakupedzisira kana iwe uine zano rekutumira zvinhu, hauzonzwa senge unoshamisika paunotanga kurongedza zvinhu nekuzvigadzirira kuti utumire kwauri. Chengeta zvese zvako zvekutumira pamwe, kusanganisira mabhokisi uye kurongedza zvinhu, zvinyorwa, uye kutumira tepi.
Ehezve, kurairwa murudzi urwu rwekuita kunogona kumiririra akawanda uye akawanda maeuro pagore iwe aunogona kuona akaderedzwa kana iwe ukasarudza iyi yekutengesa zano. Iko inokurudzirwa kwazvo kuti kubva ikozvino iwe une zvigadzirwa zvako zvese zvakanyatsorongedzwa kuitira kuti iyi yakakosha maitiro igadziriswe muzvitoro kana online commerce. Iyo ndeimwe yekiyi dzekubudirira kwekambani yako uye zvinokutorera iwe zvishoma kwazvo kuti uzviite nemazvo uye nekuranga. Izvo zvakakodzera kuyedza, chero mhando yeako e-commerce.
Shandisa imwe nguva pane izvi maitiro
Hazvisi zvese zvinofanirwa kusvika mukati mezuva rimwe chete, nekuti zvese zvinoenderana nezvinodiwa nemapati ari chikamu cheichi chinodiwa kuita mumakambani edhijitari. Kubva panguva ino yekutarisa, zvakakosha kuti kubva ikozvino utarise kumhanya kwaunoda chinhu chinoendeswa, pamwe nemutengo wemabasa aya. Iko dzimwe nguva nguva isiri iyo inonyanya kukosha pakuongorora kwayo panguva. Pamusoro pezvo, iri zano iro rinozivikanwa nekuve chairo uye pamusoro pezvinhu zvese zvitsva zvichienzaniswa nezvimwe.
Mupfungwa iyi, kana iwe ukatumira magwaro ekurumidziro, pasina kupokana, ivo vangangoda kusvika mangwana uye iwe unofanirwa kushandisa inojekesa sevhisi yebasa. Asi kana chiri chigadzirwa, icho chisingaparara, mugachiri wacho angangochigamuchira zvakanaka mumazuva mashoma, kuti ugone kushandisa zvekufambisa zvepasi. Chimwe chezvinhu zvaunofanira kufunga nezvacho kukurumidzira kana kuti kwete kweizvi zvinotumirwa, kunyanya kugadziridza kwakaringana kweaya mashandiro mukutakura kwenyika kana kunze kwemiganhu yedu.
Kudzivirira munguva dzinoshamisa
Imwe yeaya masisitimu aunogona kushandisa kushandisa iyi yakasarudzika zano inogadzira neinotevera mharidzo. Nemazuva akati wandei pasina kuendeswa mukati menguva yezororo, pamwe nekungori iyo mafashama ekutumira tsambaIzvo zvakakosha kuti uve nezano rekutumira ako mapakeji kuitira kuti vasvike pasati pazororo. Iyi nguva yegore inofanirwa kudzivirirwa pamberi nezvitoro kana mabhizinesi epamhepo. Nemhedzisiro inoshamisa kwazvo musitatimendi yako yemari pakupera kwegore rega rega.
Ndichiri kune rimwe divi, usakanganwa kuti iyo yaunomirira gare gare, ndipo pauchazobhadhara zvakanyanya kuti zvinhu zvako zviendeswe nenguva. Kana iwe uri kutumira vatengi, iwe unogona, chokwadika, kupfuudza iyo huru mari kune ivo. Kuburikidza nemhando idzi dzezviito, zorora uine chokwadi chekuti pakupedzisira unozokwanisa kudzikisa mari nekutenderedza makumi maviri muzana kana makumi matatu% pamutengo wavo wepakutanga. Naizvozvo, zvinosungirwa kune vezvemabhizinesi mune ino hupfumi chikamu. Sezvo zvavave vachiita mumwedzi ichangopfuura nechinangwa chekutanga chekuchengetedza mari uye kusimudzira mari muaccount account yemakambani aya.
Gadzira Rongedza Rongedza pane zvekutumirwa kune dzimwe nyika
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuita i'Kurongedza Rondedzero ', runyorwa runofanira kujekesa chimwe nechimwe chezvinhu zvinosanganisirwa mupakeji yako. Iyo inosungirwa maitiro uye iwe unofanirwa kuiteerera zvakanyanya kune iyo. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kusimbiswa kuti kugadzirira kwekutumira kwako kwakakosha. Maitiro anotanga ne kurema kuverenga uye nezviyero zvepakeji yako, nekuti zvinoenderana neizvi, mutengo uchasiyana. Neimwe misiyano mumitengo yakanyanya kukwirira uye inogona kutungamira mukusiyana kweanosvika makumi matatu neshanu% mune zvimwe zviitiko.
Kusarudza iko kurongedza
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kufunga kubva zvino zvichienda mberi kuti kurongedzwa uye kwakaringana kurongedza kwakakoshawo kuchengetedza zvaunotengesa kubva mukuvhunduka. Ita shuwa kuti zvinhu zvako zvakarongedzwa zvakanaka, zvichimakwa uye zvakachengetedzwa neakaringana ekumisa nekusimbisa zvinhu zvekuzvidzivirira kubva kukuvara munzira. Nenzira iyi iwe unodzivirira kutyisa kusiri madikanwa uye chii chakanyanya kukosha, kuti iwe unogona kushandisa mari zvisina basa mune irworwu mashandiro mukutakura kwezvinhu zvako kana zvinyorwa.
Zvakare nenyaya yekuti hazvigone kutumira chero mhando yechigadzirwa, nekuti pane zvinorambidzwa mune izvi. Kana kutumira kwako kuchinge kutengeswa kusingatenderwe, iko kutumira kwacho kuchashaikwa kufukidzwa kweinishuwarenzi Kune izvo, iwe unenge usina imwe mhinduro kunze kwekutarisa runyorwa rwezvigadzirwa zvigadzirwa kana zvinhu zvekuratidza kana kutumira kwako kuchiteerana neakakodzera iwo. Iyo ndeimwe yemaitiro akasimba kwazvo ekuchengetedza mari mukirasi ino yemabasa ehunyanzvi uye hazvizotora nhamburiko zhinji kuiisa mukuita. Hazvishamise kuti, chimwe chezvinangwa zvakanyanya kudiwa chechikamu chikuru chevatengi kana vashandisi ndechekugamuchira maodha avo nenzira yakachengeteka.
Sei zvakakosha kuchengetedza?
Vashandisi vanofanirwa kufungisisa zviitiko zvine simba uko, mushure menguva yekuwedzera kwehupfumi, vanofanirwa kusarudza chigadzirwa chinotendera kuderedza mari yekirasi ino yekutakura zvigadzirwa zvako kana zvinyorwa. Ipo panguva yezvinetso zvehupfumi zvingave zvakanaka kukwidziridza iri basa rehunyanzvi kuitira kuti riunze kuchengetedzeka kukuru uye kukwana kwemari yakaiswa mubhizinesi rako.
Iyi kirasi yezvigadzirwa inogona kubvumidzwa kubva kuzvitoro zvepamhepo kana mabhizinesi, ayo achiri kunyanya mukuverengera kwemakambani aya, nemari isingazivikanwe zvakanyanya, asi iyo inopa diki diki kune vashandisi senge yakananga kubhengi yemabhiri avo kana kusabhadhara. mari yekuchengetedza.
Kuisa mari ndiyo nzira yakanakisa yekutora mukana kuchengetedza kwedu, asi zvine njodzi yekuti mari inogona kuderera, tichifunga a yakazara yakazara kupa sezvo zvichikwanisika kushanda nemakirasi akasiyana emakambani ane maitiro aya. Nezvakanakira kuti iwe unayo imwe yezvakanakisa zvinopihwa zvakagadzirwa mumakore apfuura. Sezvo iri bhizinesi riri kuwedzera zvakajeka, zvakanyanya nekuda kwekumuka kwemagetsi commerce.
Kuchengetedza kwakakosha kana iko kuwana kweimwe yakanaka kana yevatengi chinhu chiri mukutarisa. Hazvishamise kuti pakati pevashandisi pfungwa yekuzadzisa zvishuwo zvavo zvenyama kuburikidza neiyi nzira isingadhuri inoenderera. Zvirokwazvo, dambudziko iri rinogona kugadziriswa kuburikidza nekupihwa kwemunhu kana mutengi zvikwereti zvinogona kusimudzira mushandisi kusvika makumi mashanu ezviuru euros, kunyangwe ichishandisa kufarira iyo inosiyana zvichienderana nechinhu chimwe nechimwe chigadzirwa, asi izvo zvinosanganisirwa muhurefu pakati pe50.000% ne6. % chingangoita Seimwe yezvinangwa zvinonyanya kudiwa nechikamu chakanaka chevatengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Logistics » Matipi ekuchengetedza mari pakutakura
Chii chinounza Twitter kuecommerce?
Chii chinonzi CEO uye nderipi basa rake mukambani?